Waa “dhunkashada dhimashada” in Qudus ay noqoto caasimadda Israa’iil - BBC News Somali
Image caption Israa'iil waxay magaalada Qudus u aragtaa caasimad aan qeybsamin, balse Falastiin waxay aaminsan tahay in bariga Qudus ay tahay caasimaddooda.
Madaxweyne Trump ayaa isagoo ka hadlayey Aqalka Cad wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday in magaalada muranku ka taagan yahay ee Quddus ay tahay caasimadda Israa'iil, go'aankaas oo ah mid meesha ka saaraya siyaasaddii uu Maraykanku ku socday tobanaan sano.
Waa shaacin aan la fileyn in uu noqdo madaxweyne Trump qofkii ugu horeeyay ee Qudus u aqoonsada in ay tahay caasimadda Israa'iil.
Dadka Falastiiniyiinta waxay ugu magacdareen in Qudus ay noqoto caasimadda Israa'iil, "dhunkashada dhimashada" in ay ku noqoneyso hannaanka nabadda ee bariga Dhexe.
Laakiin wasiir Israa'iili ah ayaa dowladaha kale ee caalamka ugu baaqay in ay raacaan waddada Mareykanka.
Daawo: Qorshaha Trump ee Qudus ma guuleysan doonaa?
Wakiilka Falastiin ee Britain, Manuel Xassassiyan, wuxuu BBC-da u sheegay in bedelidda siyaasadda dibadda ee Mareykanka ay noqoneyso "dhunkashada dhimashada" oo saameysa xalka loo raadinayo in laba dal oo deris ah ay noqdaan Falastiin iyo Israa'iil.
Sidoo kale wuxuu tallaabadaasi ku tilmaamay in ay la mid noqoneyso "shaacin dagaal".
"Wuxuu noqonayaa rarkii ugu dambeeyay ee dhabarka ka jebiya ratiga," ayuu yiri. "Ulama jeedo dagaal gacan ka hadal ah, balse waa dagaal diblumaasiyadeed."
Wasiirka waxbarashada Israa'iil Naftali Bennett wuxuu qorshaha Trump ku tilmaamay "tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka nabadda gobolka", sidoo kale wuxuu dalalka kale ugu baaqay in safaaradohooda u raraan Qudus.
Wuxuu intaa ku daray in tallaabada noocaas ah ay qasbeyso in "cadowga Israa'iil" aysan aqbalaan in Qudus aysan qeybsamin.
Sacuudiga oo saaxiib dhow la ah Mareykanka ayaa tallaabadan cusub ku tilmaamay "daandaansi qayaxan oo ku wajahan Muslimiinta".
Israa'iil waxay Qudus u aragtaa caasimaddeeda, halka Falastiiniyiinta ay doonayaan in Bariga magaalada Barakeysan ay noqoto caasimaddooda mustqabalka.
Arrinta Qudus waxay xuddun u tahay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin oo taageero ka heleysa dalalka Carabta iyo guud ahaan Muslimiinta caalamka.
Magaaladan waxay meel barakeysan oo diimeed u tahay Muslimiinta, Yahuudda iyo Masiixiyiinta, si gaar ah bariga magaalada Qudus.
Israa'iil ayaa qeybtaasi Bariga ka qabsatay Urdun ka dib dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967, waxeyna magaalada oo dhan u aragtaa in ay tahay caasimaddeeda aan la kala goyn karin.
Muranka Magaalada Qudus oo sii kordhay
Mareykanka oo go'aan ka gaari doona lahaanshaha Qudus
Sida uu dhigayo heshiiskii nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin ee 1993, marxaladda magaalada Qudus waxay ahayd in looga doodo kulamadii ka dambeeyay midkii lagu saxiixay heshiiskaasi.
In Qudus ay leedahay Israa'iil weli caalamka muusan aqoonsan, dunida oo dhanna waxay safaaradohooda ku yaallaa Tel Aviv.
Tan iyo 1967, Israa'iil waxay Bariga Qudus guryo badan uga dhistay qiyaastii 200,000 oo Yahuud ah. Caalamka ayaa deegaameyntaas u arka mid sharci darro ah, In kastoo Israa'iil ay diiday arrintaas.
Haddii Mareykanka uu Qudus u aqoonsado caasimadda Israa'iil taasi waxay noqoneysaa in guryaha bariga Qudus ay sharci u leeyihiin Bulshada Yahuudda.
Saraakiisha sare ee maamulka Trump waxay sheegeen in Qudus loo aqoonsado Caasimadda Israa'iil in ay tahay in Mareykanka uu "gartay xaqiiqada".
Mr Trump ayaa xaqiijiyay in uu xoogga saari doono heshiis nabadeed dhexmara Israa'iil iyo Falastiin, kaas oo uu hogaaminayo wiilka uu sodogga u yahay ee Lataliyaha sare u ah, Jared Kushner.
Image caption Dibad baxayaal Falastiiniyiin ah oo gubaya sawirka Trump.
Mr Trump waxaa telefoonka ka wacay dhowr hoggaamiyayaal si ay ugu wargeliyaan go'aankooda ku aadan arrinta.
Boqorka Sacuudiga Carabiya, Salman bin Cabdulcaziz al-Sacuud ayaa Trump u sheegay in safaaradda Mareykanka laga dhiso Qudus iyo in magaalada loo aqoonsado caasimadda Israa'iil "ay noqon doonto daandaansi qayaxan oo ku wajahan Muslimiinta caalamka oo dhan".
Sidoo kale, hoggaamiyaha Falastiiniyiinta, Maxamuud Cabbas ayaa ka digay "cawaaqib xumada ka dhalan kara go'aan noocaas ah oo saameeya hannaanka nabadda, amniga iyo xasilloonida gobolka iyo caalamka oo dhan"
Boqorka Urdun, Cabdullah wuxuu sheegay in go'aankaasi "uu wiiqi doono dadaalka boorka looga jafayo hannaanka wadahadallada nabadda"
Madaxweynaha Masar, Cabdulfatax Al-sis wuxuu Trump ugu baaqay "in uusan uga sii darin xaaladda cakiran ee gobolka"
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu tilmaamay in dalkiisa uu xiriir xun la yeelan doono Israa'iil
Pope Francis wuxuu qiray in wada hadal oo keli ah loo mari karo "garashada xuquuqda dadka oo dhan" ee ku nool gobolka
Wasiirka Sirdoonka Israa'iil oo lagu magacaabo Israel Katz wuxuu idaacadda ciidamada u sheegay in "ay isu diyaarinayaa wax kasta" sida in ay rabshado dillaacaan.
Faransiiska, Midowga Yurub iyo ururka Jaamacadda Carabta ayaa dhankooda walaac ka muujiyay saameynta uu yeelan karo go'aanka Trump.
Madaxda Carabta oo Trump uga digay inuu safaarada US u raro Qudus
Netanyahu oo hakiyay qorshe cod loogu qaadi lahaa deegaamaynta bariga Qudus
Erdogan oo Israel ku eedeeyey inay awood xad dhaafa u adeegsatay Falastiiniyiinta